février 2018 - Page 3 sur 83 -
Antsirabe : Lehilahy malemy may kila forehitra
Nitrangana haintrano mahatsiravina indray tany Tsarasaotra Antsirabe ambadiky ny “mosquée”, omaly vao maraina, ka lehilahy lehibe iray 76 taona, izay voalaza fa malemy no maty tsy tra-drano vokatr’izany. Tsy fantatra mazava izay niandohan’ny afo, ary …Tohiny
Halatra batery teny Sabotsy Namehana : Maty novonoin’ny tompony ilay mpangalatra
Maty tsy tra-drano avy hatrany ny lehilahy iray tratra am-bodiomby teo am-pangalarana batery ny harivan’ny alahady lasa teo teny Sabotsy Namehana. Olona teny an-toerana araka ny fampitam-baovao no nampandre ny tompon’ny fiara ho tonga eny …Tohiny
Trangam-piarahamonina : Ny 40 isan-jaton’ny adolantsento no manala zaza
Ny 25 tapitrisa ny fanalan-jaza manerantany dia tsy azo antoka, araka ny antontan’isa avy tamin’ny OMS. Izany hoe, nataon’ny olona tsy manana traikefa, mihinana fanafody tsy avy amin’ny mpitsabo, ary fampiasana fitaovana tsy azo antoka. …Tohiny
Kaomina Alarobia Bemaha : Omby 60 lasan’ny dahalo
Tsy niditra ny tanàna ireo dahalo mpanafika fa teny an-tsaha no nandraofany ny omby niraoka ahitra. Ny alahady ariva lasa teo tokony ho tamin’ny 3 ora talakandro no volazan’ny loharanom-baovao fa nahatongavan’ireo dahalo tao amin’ny …Tohiny